သစ်နက်ဆူး: ...။ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂတ်ကောင်းကင် ။...
ကျနော်တို့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ကလေးတွေ များစွာရှိနေကြပါတယ်...ဒီကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ် တွေကိုလဲ ကြိုတင်မြင်နိုင်သလို
ဝေး၀ါးနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ ဘ၀ကိုလဲ မြင်တွေ့ နေရပါတယ်...။ အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော နေရာ မှာ ရောက်ရှိနေထိုင်ကြတဲ့ကလေးတွေ ရှိနေသလို ဘာကိုမှ ကြိုတင်တွက်ဆလို့ မရတဲ့ဘ၀နဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်ရသူတွေလဲ ရှိနေပါတယ်..။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးများစွာရဲ့ အနာဂတ်ကို မိဘအရင်းတွေတောင် ကြိုတင်မမြင်နိုင်တဲ့ ဘ၀ပါ..။
ကိုယ့်သားသမီး၊ ကိုယ့်ကလေးတွေရဲ့ ဘ၀ကိုသာ မကဘဲ နီးစပ်ရာနိုင်သလောက်လေး ဖေးမ ကူညီသွားနိုင်ကြမယ်ဆို ရင်
ဥပေက္ခာပြုပြီး သူ့ ဘ၀နဲ့ သူလာတာပါ လို့ ဖြေပြော”ပြောနေတာထက်တော့ ပိုမို အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်...။
ကျနော်ကြီးကျယ်ခန်းနားစွာ နိုင်ငံနဲ့ ချီပြီး လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပေမယ့် ကျနော် လုပ်ခဲ့တာလေး၊ ကူညီခဲ့တာလေးကို အခုချိန်ထိ ပြန်တွေးတိုင်း ပီတိဖြစ်နေသလို ၊ ကလေးတွေရဲ့ ဘ၀လေးတွေကို အရောင်တင်မြှင့်တင်ပေးနေသူအားလုံးကိုလဲ ပိုပြီး လေးစားမိပါတယ်...။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီစာလေးကို ရေးမိတာပါ...။
ကျနော်ကခဲ့တုန်းအချိန်က..ဇာတ်ထဲမှာ လူစုံပါကြပါတယ်...။ အနုပညာ အတတ်ရှင်၊ မီးပညာရှင် ၊စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်နဲ့ အခန်းအနားဆက်တင် ပညာရှင်တွေ ပါခဲ့ပါတယ်..။ ဇာတ်ထဲမှာကလဲ မီးပညာရှင်ဆိုရင် မီးသမားလို့ ဘဲခေါ်ကြတာပါ...ထို့ အတူ..စက်သမား၊ ယိမ်းသမ လို့ ခေါ်ကြပါတယ်..ဒါပေမယ့် ဇာတ်တစ်ခွင်လုံး လူကြည့်ချင်လာအောင် ၊မြင်တွေ့ ရတာနဲ့ ခမ်းနားမှုရှိအောင်
ဒီအခေါ်အပြောကို ကျနော်က မကြိုက်ပါဘူး...ဒါပေမယ့် အများနဲ့ တစ်ယောက်ဆိုတော့ ဒီသတ်မှတ်ချက် အခေါ်အဝေါ်ကို ပြင်လို့ မရပါဘူး...။သူတို့ ဘ၀တွေက ပင်ပန်းလွန်းပါတယ်...ညဆိုလဲအိပ်ရတယ်မရှိ မိုးအလင်း တာဝန်ယူရတာ...သူတို့ ချင်းနားလည်မှုနဲ
ဇာတ်စထွက်ကတည်းက အော်ပဒါ ပြဇာတ်တွေဆို သူတို့ ပင်ပန်းတယ်...တွန်းဟယ်ရွှေ့ ဟယ်နဲ့နားရတယ်မရှိပါဘူး...
ကျနော်ကတော့ အားလုံးကိုတန်းတူပေါင်းတယ်...ဆုငွေတွေအများကြီးရလာရင် လ္ဘက်ရည်တိုက်တယ်..မုန့် ကျွေးတယ်...။
လူကိုလူလိုဆက်ဆံတော့လဲ သူတို့ ကိုယ်တိုင်က ပိုပြီးကိုယ့်ကိုခင်မင်ကြပါတယ်...။
အဲဒီ ကားအဖွဲ့ ထဲမှာ ငပယ်လို့ ခေါ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ရှိတယ်...သူက ကားဘက်ဆိုင်ရာက၊ သူ့ မိန်းမက ဇာတ်ထဲကမဟုတ်ပေမယ့်
ဇာတ်နောက်လိုက်နေတာ...ပြီးတော့ ဈေးရောင်းတယ်.ပွဲခင်းထဲမှာပေါ့..။ သူတို့ ပူဖောင်းရောင်းချင်တယ်ဆိုလို့အရင်းကို ကျနော်ဘဲ ထုတ်ပေးခဲ့တာပါ..။
သူတို့ ကလေး၃ယောက်လားရှိတယ် အိမ်မှာဘဲ အဘွားနဲ့ နေကြတာပါ ။ ကျောင်းပိတ်ပြီဆို သူတို့ မိဘတွေရှိရာကို လိုက်လာကြတတ်တယ်..ဒါပေမယ့် ဇာတ်ရုံဘေးနားမှာဘဲ ဆိုင်ခန်းလေးလုပ်ပြီးနေကြတာပါ...။
ကလေးတွေက နေ့ လည်ခင်း အဖွဲ့ သားတွေ အိပ်ရေးဝလို့အိပ်ယာထပြီးကြရင်တော့ ဇာတ်ရုံထဲမှာ ကစားတတ်တယ်..တခါတလေ ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ တက်ဆော့ကြပေါ့...။
တစ်နေ့ တော့ ကျနော်က အိပ်ယာထပြီးလို့ အပြင်မှာ လ္ဘက်ရည်သောက်ပြီး ပြန်ဝင်လာချိန်မှာ ငပယ်နဲ့ မီးဘက်က မြင့်ဝေနဲ့ စကားများနေကြတယ်...ငပယ်ရဲ့ သားလေး( အသက်၁၃ နှစ်အရွယ်) လေးက ငိုမဲ့မဲ့နဲ့..။ သူ့ အမေကလဲ သူ့ ဘေးမှာ မျက်ရည်ဝိုင်းနေတယ်.။
“ အို...ကားဆွဲသားက ကားဆွဲဘဲ ဖြစ်မှာပေါ့...ဘာ က”စရာလိုလဲ...” ဒီစကားကြားလိုက်တော့ စိတ်ထဲမှာ ဖျဉ်းကနဲဖြစ်သွားတာ။
ကိုယ်ကလဲ ဒီလိုဖြစ်နေတော့ မျက်နှာလွှဲနေလို့ မတတ်ပါဘူး...
“ မဟုတ်ဘူး မင်းသား...သူ့ သား အလကားနေရင်းဆော့နေလို့ ကျနော်ပြောတာ ”
“ အေး...က တာကိုပြောတာ။ ကားဆွဲသားက ကားဆွဲဘဲ ဖြစ်မှာ...”
“ မင်း ဒီလိုမပြောနဲ့ငါ့ကလေးတွေကို ပညာတတ်အောင် ကျောင်းထားပေးတာဘဲ...မင်းနှိမ်တာတော့ မကောင်းဘူး...”
“ ခုနက ကိုမြင့်ဝေ ပြောတာ ကျနော် ကြားတယ်...ကားဆွဲသားက ကားဆွဲဘဲဖြစ်မယ်ဆိုတာ..၊ အဲလို ပုံသေပြောလို့ မရပါဘူး...ပြောလဲမပြောသင့်ဘူး။ ကျနော့်အဖေကစစ်သား...ကျနော်စစ်သားမဖြစ်ဘူး...မင်းသားဖြစ်ခဲ့တယ်..၊ ကိုမြင့်ဝေအဖေရော ဘာအလုပ်လုပ်လဲ”
“ ခင်ဗျား...ဘာကြောင့်လက်သမားမဖြစ်ဘဲ...မီးထိုးသမားဖြစ်နေတာလဲ ”
“ ဒါကတော့.....” သူဘာဆက်ရမှန်းမသိဖြစ်နေပြီ..။
“ ကိုငယ်ပြောတာ မမှားပါဘူး...ဒါပေမယ့် ဒိကောင်လေးက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး...”
ဒီလူတော့ ဒီဘူတာဘဲ ပတ်နေပြီ...စိတ်ရှိတိုင်းသာဆွဲထိုးလို့ ကတော့ ဒီလူ နာတော့မယ်...။
“ ကဲ...ကောင်းပြီ...တော်ကြတော့ ၊ မင်းတို့ သားအမိလဲ ငိုမနေနဲ့ ဟုတ်လား၊ ကိုမြင့်ဝေလဲ သွားတော့...”
သူတို့ ပြဿနာကို လူစုခွဲ ရှင်းပြီး...ကိုယ့်အခန်းကို ကိုယ်ပြန်လာခဲ့တော့တယ်...။
အခန်းထဲေ၇ာက်တော့ ခုနက အဖြစ်အပျက်ကို စဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ်...။
“ အောင်အောင်....အကိုလ္ဘက်ရည်ဆိုင်ပြန်သွားမယ်...ပြီးရင် ငပယ်တို့ သားအမိ၃ယောက်လုံး...အကိုခေါ်နေတယ် လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ကို လိုက်လာလို့ သွားပြောလိုက်”
ဆိုင်ရောက်တာနဲ့ လ္ဘက်၇ည်၎ခွက်မှာပြီး စောင့်နေလိုက်တယ်...။
မကြာပါဘူး သူတို့ သားအမိတွေ မျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ ရောက်လာပြီး မြေပေါ်မှာဘဲငုတ်တုတ်လေးတွေ...။
“ ရတယ်အကို ကျနော်တို့ အောက်မှာဘဲနေမယ်...”
“ ကျနော်ပြောနေတယ်...ခုံပေါ်မှာထိုင်ဆို..” အဲဒီတော့မှ မရဲတရဲနဲ့ သူတို့ ထိုင်ပါတယ်...။
ကျနော်ထင်တယ် ခုနကဖြစ်တာကို ဆူမယ်ထင်နေကြတာနေမှာ ...။ကျနော်သူတို့ ထိုင်ပြီိးတာနဲ့ ...လ္ဘက်ရည်သောက်ခိုင်းတယ်၊ ကလေးကိုလဲမုန့် စားခိုင်းတယ်..။
ဒါတောင်သူတို့ ကငြင်းသေးတယ်..မနည်းပြောမှ သောက်ရဲတာ...။
“ ကဲ...ငပယ်..မင်းသားကို ဘာဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်လဲ...”
“ ကျနော်လဲ မသိဘူး...ကျောင်းတော့ ထားတာပါဘဲ..ဒါပေမယ့် ကျောင်းစားရိတ်တွေကလဲ မလွယ်ဘူး...သူကလဲ ကျောင်းမပျော်ဘူး”
“ သူက...မင်းသားအကကို စိတ်ဝင်စားလား”
“ က...တော့ က နေတာဘဲ”
“ ဗျာ....ဟို ...ကျနော်တို့ မှာ ပိုက်ဆံ မရှိဘူး...အကို”
“ ငါ..တစ်ပြားမှ မယူဘူးကွာ...သင်ပေးမယ်၊ မင်းရဲ့ သားကိုသာမေး၊ တစ်ကယ် အကပညာကို လိုချင်တာလားလို့ ...”
“ အေး...ငါက တပည့်လက်မခံဘူး...ဘာလို့ လဲဆိုတော့ စိတ်တိုင်းမကျလို့ ...တော်ရုံဇွဲနဲ့ လဲ ငါ့ ပညာကို မရဘူး...နောက်ပြီး
“ မင်း တစ်ကယ်ကချင်တာဆို ကျိုးစား...မင်းကို ခုနက ဦးမြင့်ဝေ ပြောသွားတာ မင်းကြားလား...ကားဆွဲသမားသားက ကားဆွဲဘဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ”
“ မင်းကျိုးစားလို့ အောင်မြင်ခဲ့ရင်...မင်းမိဘတွေကို လုပ်ကျွေးနိုင်တာပေါ့...ပူဖောင်း ၁၀ညကျော် ရောင်းလို့ ရမယ့်အမြတ်ငွေကို မင်းတစ်ညကရုံနဲ့ ရနိုင်တယ်”
ကျနော့်စကားကြောင့်သူတို့ မိသားစုလေး အံ့သြနေတယ်...ဇာတ်တွေမှာ မင်းသားသင်ပြီဆို ငွေကလဲပေးရတယ်...မိုးတွင်းစားဘို့ ဆန်ကလဲ ပေးရတယ်...မင်းသားမိန်းမချိုးရေကအစခပ်ပေးရတယ်...ကလေးထိန်းပေးရတယ်...ဆဲခံရတာကလဲ မွှန်နေတာပါဘဲ..။
“ ကဲ...ဒီဇာတ်ခေါင်းပြုတ်တာနဲ့ ...ကိုယ့်ဆီကိုမင်းတို့ သား လာပို့ ပေး...ဟုတ်လား...”
ပြောပြောဆိုဆို ထိုင်နေရာက ထပြီး အတင်း ၃ယောက်လုးံ ထိုင်ကန်တော့နေလို့ မနည်းတားရတယ်...။
တစ်ကယ်တမ်း မင်းသားတစ်ယောက်ပညာသင်စားရိတ်ဟာ မနည်းပါဘူး....နောက်ပြီိး တပည့်အဖြစ်လိုက်နေ၇တာ က ၃...၄နှစ်၊ တစ်ချို့ လဲ ဒါဏ်မခံနိုင်လို့ လမ်းတစ်ဝက်နဲ့ဝါသနာကို စွန့် ပြီး ထွက်သွားတာတွေ အများကြီးလေ...။
ဒီလိုနဲ့ မိုးတွင်းရောက်တော့ သူတို့ သားအမိတွေ ပေါ်ဆန်းမွှေးတစ်အိတ်နဲ့ အ၀တ်ထုပ်လေးနဲ့ ရောက်လာပါတယ်...ဆန်ကိုလက်မခ့ဘူး..ပြန်ယူသွားခိုင်းတော့ ပြန်သယ်၇တာလဲ မော်လမြိုင်အထိ မလွယ်လို့ ပါ...ဆိုပြိး အတင်းထားခဲ့ ပါတယ်....။
ကျနော်က တစ်လကို အလွမ်းပြေ တစ်ခါဘဲ လာခိုင်းတယ်...တော်ကြာ ကလေး သတိရစိတ်များနေ၇င် သင်လို့ စိတ်ပါမှာမဟုတ်လို့ ပါ...။
သူပျော်အောင် ၃ရက်လောက်လွှတ်ထားပေးပြီး...အခြေခံ စသင်ပေးတယ်...သူကလဲတော်တော် ကြောက်နေတာနဲ့ရေခပ်နေတဲ့ တူမ( မဒမ်ဆူးရဲ့ တူမ) ကိုပါဆွဲသင်ပေးတာ...ကောင်မလေးက ၀ါသနာကိုမပါတာ...၊ ကျနော့်ကြောက်တော့ သူပါ ၀င်ရတော့တာ...။
သူတို့ ကို အကသင်တာ မဒမ်ဆူး အံ့သြနေတာ...။
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျောက်တုံးတွေကို လက်ဆင့်ကမ်း ခါးလိမ်ပြီး ပေးခိုင်းတာ ၊ ခေါင်းပေါ်ကကျော်ယူပြီး တစ်ဖက်ကို ခါးလိမ်ပြီး ပေးခိုင်းတာ...၄ ကွက်သိုင်း အခြေခံတွေ ပေးနင်းတာ...ဒါတွေကြည့်ပြီး....
“ ကို...သူတို့ ကို သိုင်းသင်နေတာလား...သူတို့ ကို အကသင်ပေးမှာလား” လုပ်နေသေးတာ..။
“ မိန်းမ ...မသိရင်ကြည့်နေ...ဒါ၃နှစ်သင်တဲ့ ပန်တျာကျောင်း မဟုတ်ဘူး...၃လ ဘဲ အချိန်ရှိတာ ၊ အေး...သိုင်းကွက်တွေကို တစ်ကယ်ကျွမ်းကျင်ရင် မင်း မျက်စေ့ ထဲမှာ က...ကကွက်တွေလို့ မြင်ကြည့်ပေါ့...အခု ဂျက်လီ ကစားနေတဲ့ ဝူရှုး၊ ထိုက်ချိ မယုံရင် မျက်စေ့ ထဲမြင်ကြည့်လိုက်လေ....အခြေခံတွေက ...အကွက်တူတယ်...အားအသုံးပြုပုံနဲ့ လက်ချိုးတာဘဲ ကွာတာ....။
ကျနော် တော်တော်မောင်းတာပါ ကလေးတွေ မျက်ရည်ကျချင်နေပြိဆို ဆင်းရဲတဲ့ ဘ၀တွေကိုပြောပြတယ်...ဗီဒီယိုပေးကြည့်တယ်...ကိုယ်တိုင်မုန့် လုပ်ကျွေးတယ်..ဟင်းကောင်းကောင်းချက်ကျွေးတယ်....။
ကျနော် မင်းသားတစ်ယောက်ကို ချမ်းချမ်းစီးစီး ဘိနပ်လျှော်ပေးခဲ့ရတာတွေ ပြောပြပေးတယ်...။
ခေတ်ပေါ်ရှိုးတွေအတွက် ဘရိတ်၊ဂျက်ဆင်အကတွေ ညဆို သင်ပေးတယ်...၊ သေတ္တာက ၊ ကြိုးတန်းက ပုဝါက စတဲ့ မွန်ပြည်နယ် အကြိုက်တွေက အစ သင်ပေးခဲ့တာ...။
သမီးကြီးက ညတိုင်ဆို စာသင်ပေးတယ်...၊ စားတော့လဲ သမီးတို့ နဲ့ အတူတူ တစ်တန်းတည်း...။
၃လ ဆိုတဲ့ အချိန်က ခဏလေးလိုဘဲ.....။
ကျနော်သူ့ ကို စိတ်တိုင်းကျသင်ပေးပြီးတာနဲ့ သူ့ မိဘတွေကို အကြောင်းကြားပြီး ခေါ်လိုက်တယ်...။
“ ကိုယ်ကတော့ မင်းသားတစ်ယောက်တတ်သင့်တာတွေ သင်ပေးလိုက်ပြီ...ပညာဆိုတာတော့ မကုန်တတ်ဘူး....ကိုယ်တိုင်ကလည်းထပ်လေ့လာ၇မယ် ..မိဘတွေကလဲ ထိန်းပေးရဦးမယ်..... အခွင့်အရေးကို ရတိုင်းမယူကောင်းဘူး...ဒါပေမယ့်
အခွင့်အလမ်းကိုတော့ သိမြင်နေရမယ်...ကျိုးစားနေတဲ့ သူအတွက် အခွင့်အရေးဆိုတာ ပေါ်လာတတ်တယ်..အမိအရ ဆုပ်ကိုင်တတ်ဘို့ ဘဲ လိုတာ...ဟတ်လား..”
အဲဒီနှစ်က ကျနော် အရေးကြီးကိစ္စတွေ ရှိနေလို့ ဇာတ်မကတော့ပါဘူး...။
ကိုယ့်ဝါသနာပန်းချီဆွဲရင်း သူများတွေကို ကူညီရင်းနဲ့ ဘဲ...ဇာတ်လောကနဲ့ အဆက်ပြတ်နေခဲ့ပါတယ်...။
ဒါပေမယ့် ဇာတ်လောကမှာတော့ ကျနော်တပည့်တစ်ယောက်ကို အားခြင်းသင်နေတာ သတင်းပျံ့ နေပါတယ်...
တစ်ချို့ ကလဲ ၃..၄လနဲ့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး...တစ်ချို့ ကလဲ ကျနော့်ကို လျှော့မတွက်နဲ့ ...စုံနေတာပါဘဲ..။
၅လ ကျော်လောက်မှာတော့ ကျနော်ပုံဆွဲနေတုန်း အိမ်ရှေ့ မှာ ကားရပ်သံကြားပြီး....
“ ဦး...” ဆိုပြီး အော်လိုက်သံကြားမှ ခေါင်းမော့ကြည့်တော့....ကျနော့်ကောင်လေးနဲ့ သူ့မိလတွေ နဲ့ အဘွားပါပါလာတယ်...။
ကျနော်မေးတာ မဖြေဘဲ...ပိုစတာ စာရွက်ကြည့်ဖြန့် ပြပါတယ်...။
“ အကို့ သားသူများဇာတ်မှာ ဧည့်သည်အဖြစ်ဝင်ကတာကို ဘားအံဇာတ်က ဇာတ်ဆရာ သဘောကျပြီး ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်လာခေါ်လို့ လက်ခံလိုက်ပြီ...ဒီမှာ ဇာတ်ပိုစတာတောင် ထွက်အောင်စောင့်ပြီး ဆရာ အံ့သြအောင်လာပြတာ”
ဟုတ်တယ် ...ကျနော့်တပည့်မှ ကျနော့်တပည့်၊
ဒါ ...ကျနော်ပျိုးလိုက်တဲ့ ပန်းကလေး...။ မင်းသားနာမည်က မျိုးမျိုး...တဲ့ ။
သူတို့ လက်ဆောင်တွေနဲ့ ကန်တော့တယ်...ဆရာ အတွက်ဆိုပြီး ထိုင်းကထုတ်တဲ့ ခြုံစောင် အနီ အထူကြီးတစ်ထည်လဲပါတယ်...
နောက် မဒမ်ဆူးအတွက် ကလေးတွေအတွက်စုံနေတာပါဘဲ...။
အားနာလို့ မယူပါရစေနဲ့ ပြောလဲ မရပါဘူး...။
ကျနော်တစ်ကယ်က ဒါတွေမလိုချင်ပါဘူး.....ကျနော်လိုချင်တာ ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ ပီတိပါ..။
နောက်ပြန်ကာနီးတော့ သူတို့ ကန်တော့ပါတယ်...။ ကျနော်ကလဲ မှာစရာရှိတာမှာပါတယ်...။
“ မောင်မျိုး...မင်းကို ဦး ဘိနပ်လျှော်ပေးခဲ့ ရတဲ့ အကြောင်းပြောဘူးတယ်နော်..”
“ ဟုတ်ကဲ့ ဦး...”
“ မင်းတို့ သူ့ အတွက်လက်ဆောင် ကောင်းကောင်းဝယ်ပြီး...သူ့ ဆီကိုသွား...မောင်မျိုး...မင်းသူ့ ကို မင်းအဖေ အမေတွေပါခေါ်သွား...ပိုစတာပါယူသွား...ကန်တော့လိုက်....ပါးစပ်ကလဲပြော...”
“ ကားဆွဲသမားရဲ့ သား၊ ပူဖောင်းသည်မသား မင်းသားဖြစ်သွားလို့ လာကန်တော့တာပါ....ဦးပြောလိုက်လို့ ကျနော့်ဘ၀တိုးတက်ခဲ့တာပါလို့ ပြော...ဟတ်လား”
ဒါပါဘဲ....ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂတ် ကောင်းကင်....။
ကျနော်နိုင်သလောက်လေးနဲ့ လုပ်ပေးခဲ့ဘူးတယ်...။ တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ စာလိုက်ရင် မကြီးကျယ်ပါဘူး...သူတို့ ပါတ်ဝန်းကျင်လေးမှာတော့
ကလေးရဲ့ ဘ၀ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်....။
ကိုယ်မကူညီနိုင်၇င်တောင်...ကိုယ့်စကားလေးတစ်လုံးနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို အညွန့် မချိုးဘို့ အရေးကြီးပါတယ်...။ ကျနော်တို့ လက်တစ်ကမ်းမှာ ကလေးတွေ အများကြီးပါ...။
ကျနော်တို့ တစ်ယောက်တစ်လက် ကူညီိကြမယ်ဆို...ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်လေးတွေလှပမှုပိုများလာမှာပါ...။
ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို ဘ၀နဲ့ ရင်းပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေသော....ပန်းပျိုးသူများကို ဂုဏ်ယူလေးစားစွာဖြင့်.........
Posted by သစ်နက်ဆူး at 4:28 AM
ပို့စ်တိုင်း စေတနာတွေကို မြင်ရတယ်၊ အားပေးလျက်ပါ ..
အကို့လို ကလေးလေးတွေရဲ့ ဘဝလေးတွေကိုမြှင့်တင်နိုင်မယ့် တနေ့တော့ရောက်လာကောင်းမှာပါ....
အဲဒါ ဂျွမ်းထိုးတဲ့ နော်နော်လေ...
ကြက်သီးထလောက်အောင်ကို ပဲ ကိုသစ်နက်ဆူးကို အံ့သြချီးကျူးမိပါတယ်... ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို မြှင့်တင်ပေးတာ... အရမ်းကို လူသားပီသပါတယ်....
တချို့လူတွေရဲ့ မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်တတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြောင့် ကလေးတွေရဲ့ အညွန့်တွေ ကျိုးကုန်တာပါ.... အဲဒါကြောင့်လည်း အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေ ပျက်စီးကုန်တာပေါ့..... အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေပါ....
ကိုဆူးရေ ... စာလာဖတ်ဖြစ်ပေမဲ့ အချိန်ပေးပြီး ကွန်မန့်မရေးဖြစ်ဘူး။ ဒီနေ့တော့ နက်ဖန် သဘက်ခါ ပိတ်ရက်မို့ အချိန်လေးနည်းနည်းရတာနဲ့ ကွန်မန့်ရေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုဆူးရဲ့ စေတနာနဲ့ လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းကို တကယ်ပဲ လေးစားမိတယ်။ ရင်ထဲမှာ စေတနာရှိတိုင်းလဲ လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိရင် မထိရောက်ဘူး။ ကိုဆူးကတော့ စိတ်ပါ လက်ပါဆိုတဲ့စကားအတိုင်း စိတ်ရောလက်ရော အကုန်ပါပြီးတော့ကို ကူညီခဲ့တာပဲ။
ကိုဆူးလိုမျိုး ... ဆီဖြစ်စေနိုင်မယ့် နှမ်းတစေ့ပေါင်းများစွာ ဗမာပြည်အတွက် တကယ်ကို လိုအပ်ပါတယ် ... ။
အရွယ်ရောက်နေသူတွေ တွေ့မြင်ဖတ်ရှူသတိတရ ရှိသွားကြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။
စေတနာဆိုတာကလဲ လူတိုင်းမှာ မရှိကြဘူး။ လူတွေရဲ့ စိတ်တွေနဲ့လဲဆိုင်မယ်ထင်တယ်။
တချို့က ဘဝနာတယ် ..ကြိုးစားတယ်..အောင်မြင်တယ်.. ဘဝတူတွေကို ကူညီချင်တယ်။တချို့ကျတော့ ငါ့တုန်းက ခံခဲ့ရတာ ငါ့အလှည့်ကျ..ရင်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ဘဝတူတွေလည်း မကူညီချင်ဘူး အကိုရေ..။
မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီလို လူတွေ အခုဆို သိပ်များနေပီ.
အကိုရေးတဲ့စာလေးတွေဖတ်ပီး ကိုယ်ပြုစုပျိုးထောင်လိုက်တဲ့ ပန်းကဖူးပွင့်သွားတဲ့ ပီတိကို စားသုံးခွင့်ရတာ ကျေနပ်စရာပဲနော်။
ကိုဆူးသစ်တို့လိုလူမျိုးတွေ မြန်မာပြည်မှာအများကြီးရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာ....
အကိုဆူး .. ဖတ်ပြီး မျက်ရည်ဝဲမိတယ် ။ တကယ်ပါ ။
တချိန်တည်းမှာ သူငယ်ချင်းတယောက် သူ ဖတ်ထားတဲ့အထဲက ပုံပြင်လေးတပုဒ်ကို ပြန်ပြောပြတာ သတိရမိတယ် ...
တနေ့မှာ လူတယောက်က ကမ်းခြေမှာ ရေတင်ပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ starfish လေးတွေကို တခုချင်းစီ ကောက်ပြီး ပင်လယ်ကြီးထဲကို ပြန်၂ ပစ်ချပေးနေသတဲ့ ။ သောင်ပြင်ပေါ်မှာတော့ ရေကျသွားတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကြယ်ငါးတွေက အများကြီး ဟို၂ ဒီ၂ ပေါ့ ။ ဒီရေပြန်မတက်လာခဲ့ရင် သောင်ပြင်ပေါ်က အဲဒီ ကြယ်ငါးလေးတွေဟာ သေရမယ့်ကိန်း ဖြစ်နေတယ် ။
အဲဒီလူက ကြယ်ငါးလေးတကောင်ချင်းစီ ကောက်လိုက် ပစ်လိုက် လုပ်နေတာကို မြင်တဲ့ တခြားလူတယောက်က မေးသတဲ့ ... “ခင်ဗျား ခုလို လုပ်နေတာ အချိန်မကုန်ဘူးလားဗျာ ။ နောက်ပြီး ဘာများ အကျိုးရှိမလဲ ။ သောင်ပြင်ပေါ်မှာ တင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ကြယ်ငါးတွေ များလိုက်တာ .. ခင်ဗျား သူတို့အားလုံးကို ပင်လယ်ကြီးထဲ ဘယ်ပြန် လွှတ်နိုင်မလဲ” ။
အဲဒီအခါ ပထမလူက ပြုံးပြီး ... ကြယ်ငါးလေးတကောင်ကို ကောက်ယူလိုက်တယ် ... ပြီးတော့ ပင်လယ်ထဲကို လွှတ်ချလိုက်တယ် .. ပြီးတော့ ဘာ ပြန်ပြောလဲဆိုရင် .. “အေးဗျာ အကုန်လုံးအတွက်တော့ ကျနော်လည်း မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဖူး ။ ဒါပေမယ့် ဒီကြယ်ငါးလေးတစ်ကောင်ရဲ့ အသက်ရှင်ရေးအတွက်တော့ ကျနော်လုပ်ပေးလိုက်တာ အကျိုးရှိသွားတာပါပဲ” တဲ့ ။
ကိုဆူး.. အတုယူစရာတွေ လာယူသွားတယ်။ ပီတိတွေလည်း ရသွားပါတယ်
ကလေးတွေကို မြေတောင်မြှောက်ပေးချင်တတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားပါတယ်ဗျာ။ တကယ်ပါ။
i like most of your post especially motivation articles. For me when depressalot i go to ur side, ma cho thin side n ko navana site. ur side make me energy, ma cho thin site make me warm n ko navana site make me smile. Life is very tough and sometime very difficult to move on that kind of time reading like ur post is really make me strong. Pls write the post how become pro paint artist n how u try(like as burmese damcer).
thks n rgrds
အစ်ကိုရေးတဲ့ပို့စ်တိုင်းမှာ တိုးတက်စေချင်တဲ့ ဇွဲရှိစေချင်တဲ့...စေတနာတွေတွေ့နေရတယ်...
ခြားကကူးပြောင်းလာတဲ့ အစ်ကို... ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသေခြာနားလည်ပြီး နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေ လို့ညီငယ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
ကိုသစ်နက်ဆူးရေ… ဒီပို့ စ်လေးက ဘယ်တော့မှ မမေ့မယ့် ပို့ စ်လေးပါပဲ… ရည်ရွယ်ချက်ရော စေတနာပါကောင်းလွန်းလို့လေးစားမိပါတယ်… ပျိုးထောင် မြေတောင်မြှောက်ပေးတဲ့ ဥယျာဉ်မှုးလို စိတ်ဓါတ်လေးက လေးစားအတုယူစရာပါ… ဒီလို အတွေ့ အကြုံလေးတွေ များများဝေငှပါဦးနော်…ကျေးဇူးပါ…
မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်တတ်တဲ့ လူတွေဟာ အင်မတန် ဘောင်ဘင်ခတ်တာပဲ။ လူဖြစ်ရခြင်းရဲ့ တန်ဖိုးကို နားမလည်ဘူး။ လူဖြစ်တာနဲ့ သူက ကြိုးစားရင် ဘုရားတောင် ဖြစ်နိုင်တယ်။
အထူးသဖြင့် ကလေးတွေ..။ ကလေးတွေဆိုတာ အညွှန့်တလူလူနဲ့ သူ့ရှေ့မှာ သူပိုင်တဲ့ အနာဂတ်နဲ့။
ကိုဆူးက ကလေးတယောက်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ရုပ်လုံးဖော်ပေးခဲ့တာမို့ ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာ ဘ၀မှာ Blessing ပါပဲ။
သြော်.. တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲလား.. ဘ၀တွေကို လိုက်ဖျက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက် ပြန်ဘ၀ပျက်တဲ့ ဇာတ်ကြောင်း ရေးနေတုန်း ဘ၀တွေကို လိုက်ဆယ်တဲ့ ပို့စ် ဖတ်ရလို့ တော်ပါသေးရဲ့လို့ ရင်ပေါ့သွားတယ် ဆူးပြတိုက်ရေ.. ဒီဆူးကတော့ ပြန်ထွင်တဲ့ ဆူးမို့ တော်ပါသေးရဲ့.. ဥပေက္ခာ ပါရမီ ဖြည့်ရမယ့် အချိန်ရောက် ရင်တော့ ကရုဏာ သံယောဇဉ်တွေနဲ့ ကယ်ဖို့ အခြေအနေ ပေးတော့မယ် မထင်ဘူးနော်..